China Achromatic Lens, Achromatic Lens Microscope, Achromatic Lens Focal Kureba Mugadziri
Tsanangudzo:Achromatic Lens,Achromatic Lens maikorosikopu,Achromatic Lens Yakajeka Kureba,Maikorosikopu Optics,,
 HomeProductsIdenderedzwa LensAchromatic Lens
Achromatic Lens (Total 10 Products)
Zvigadzirwa zve Achromatic Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Achromatic Lens , Achromatic Lens maikorosikopu vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Achromatic Lens Yakajeka Kureba R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Yakakwira Precision Micro Achromatic Lens
54mm Dia 230mm FL Achromatic Lens
Pedyo neIri yakavharwa achromatic lens
Optical girazi achromatic triplet lens
Realpoo Optics inogona kugadzira iyo achromatic lens iyo iyo dhayamita yakakura kudarika 50mm. Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa...
Unit Price: 5~99
Realpoo Optics inogona manufacure square achromatic lens. Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune ese paraxial...
Unit Price: USD 5 - 99 / Piece/Pieces
Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune ese paraxial imaging mabasa. Aya malenzi akafukidzwa nechero dura...
Realpoo Optics inogona kupa kumucheto kusviba echromatic lens. Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune ese...
Aachromatic triplet lens ndeyemakemikari lens ine matatu matatu malenzi. Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune...
China Achromatic Lens Vatengi
Achromatic lenses mubatanidzwa weyakajeka yakadzika refractive index (korona korona) uye isina kunaka yakakwira refractive index (dombo rakaoma kwazvo). Inofananidzwa ne monolithic singlet lens iyo dhizaini dhizaini inogona kupa vashandisi kuwedzera dhizaini dhizaini uye nekuwedzera kugadzirisa mashandiro eiyo lens. Naizvozvo, zvakanakira malensi echromatic akakosha kupfuura aya ealensi imwe chete ane dhayamita yakaenzana uye kureba kwekutarisa.
Achromatic Lenses anoshandiswa kudzikisira kana kubvisa chromatic aberration. Iyo echromatic dhizaini zvakare inobatsira kudzora idenderedzwa aberrations Achromatic Lenses akanaka kune akasiyana mafomu, kusanganisira fluorescence microscopy, mufananidzo relay, kuongorora, kana kuratidzira. Achromatic Lens, iyo inowanzo gadzirwa nekumisa zvinhu zviviri pamwechete kana kuisa zvinhu zviviri mudzimba, inogadzira madiki mashoma masize pane akafanana lenzi lenzi.
Achromatic Lens Achromatic Lens maikorosikopu Achromatic Lens Yakajeka Kureba Maikorosikopu Optics Achromatic Lenses